भखरै आयो काठमाडौं बासीहरुको लागि खुसीको खबर ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
भखरै आयो काठमाडौं बासीहरुको लागि खुसीको खबर !
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका घरभेटी (घरधनी)हरुले बहाल करमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउने भएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि घर बहालमा लगाउने लगाउने करदातालाई आगामी आर्थिक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट दिने भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका घरभेटी (घरधनी)हरुले बहाल करमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउने भएका छन्।काठमाडौं महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि घर बहालमा लगाउने लगाउने करदातालाई आगामी आर्थिक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट दिने भएको छ।
महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ्ग वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायहरु (जस्तै होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्र) लाई उल्लेख्य छुट दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।